Somalia oo markii ugu horeysay lagu arkay wax u muuqda Caabuqa ZIKA Virus - Bandhiga Media
Somalia oo markii ugu horeysay lagu arkay wax u muuqda Caabuqa ZIKA Virus
News Service January 30, 2020
Somalia ayaa lagu arkay kiiskii ugu horreeyay ee Zika, wiil aad u da’ yar aya lagu soo waramayaa in uu u dhintay Zika, balse qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa kusoo waramaya in uu u muuqaal eg yahay Caabuqa ZIKA.
Haweeneyda dhashay canuga, oo ku nool magaalada Muqdisho ayaan inoo sheegtay in ay ka walaacsan tahay sida ay wax noqdeen, maadaama aysan fileyn waxa dhacay.
“Waxaan geyey cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho, waxa ay maalmo kadib ay igu wargiliyeen dhaqaatiirta cisbitaalka in aan wax laga qaban Karin xanuunkaan dalka gudihiisa” ayay tiri Hooyada dhashay canuga lagu arkay wax u eg caabuqa ZIKA.
Hooyada dhashay cunuga yar, ayaa waxa ay nala wadaagtay sawirada cunuga inta uusan geeriyoon, waxa ay inoo sheegtay hooyada dhashay cunuga, in qof aan lala wadaagin sawirada cunugeeda.
Intaasi kadib, Bandhiga Media ayaa waxa ay xiriir la sameysay, Khubaro ku xeel dheer arimaha caafimaadka, ee ku sugan dalka Dibadiisa, saacado kadib ayaa waxa ay nala wadaageen jawaabta su’aasha aan weydiinay ee aheyd, waxa ku dhacay cunugaasi yar?
Waxa ay inoo sheegeen in cunugaasi yar ay ku arkeen qaar ka mid ah astaamaha caabuqa ZIKA.
Hadaba; Caabuqa ZIKA muxuu yahay?
Qandhada Zika waxaa loo yaqaanaa Zika Virus oo ah xanuun keena Virus-ka Zika, waxaana soo gudbiya nooc kaneecada ka mid ah ee loo yaqaano “Aedes genus”
Xanuunkaan markii ugu horeysay ayaa waxa lagu arkay dalka Uganda sanadkii 1947 – kii.
Xanuunkaan waxa uu si weyn ugu fidey dunida, iyadoo lagu arkay qaar ka mid ah qaaradaha dunida, sida Africa, Asia iyo America
Bishii July 2015, waxaa caabuqaan lagu arkay dalka Brazil.
Nabro maqaarka kasoo baxa
Qandho joogta ah.
Murqaha iyo kala goysyada oo qofka xanuuno
Daal in uu dareemo qofka, iyo madax xanuun joogto ah.
Caabuqaan muxuu qofka uu ku reebi karaa?
Hay’adda caafimaadka aduunka ee WHO ayaa waxa ay soo gudbisay 30-kii bishii May, 2016 xanuunka Virus-ka ee Zika ee ku dhaca haweenka uurka leh, kaas oo sababi kara “Congenital Brain abnormalities” iyo cudurada neerfaha.
Feyruskaan oo ay kaneecada gudbiso, kaasi oo khatar ku ah haweenka xaamilada iyo ilmaha yar, inta ay uurka ku jiraan, ayaa saameyn ku yeeshay caruur fara badan oo ku nool wadamada caalamka.
Caabuqaan ayaa waxa uu si baaxad leh ugu faafayey sanadihii 2015 iyo 2016, dalal fara badan oo inta badan dhaca waddamada Koonfurta Amerika, waxaa sidoo kale cabsi wayn laga muujiyay in uu caabuqaan kusii fido wadamada soo koroya.
Ugu danbeyn; caabuqaan waxa lagu arkay wadamo dhaca Africa, sida Uganda, balse Somalia ayaa lagu soo waramayaa in markii ugu horeysay lagu arkay qaar ka mid ah calaamadaha caabuqaan.
Stories from Somalia: Displaced Families in Somalia Now Hit by Floods – Somalia – ReliefWeb
Somalia first seen possible evidence of ZIKA virus infection